‘भोजपुरमा अरुसँग फोस्रा गफ बाहेक केही छैन, एमालेसँग समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र छ’ - Naya Page‘भोजपुरमा अरुसँग फोस्रा गफ बाहेक केही छैन, एमालेसँग समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र छ’ - Naya Page
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीन तहको सरकार मध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन आगमी ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न हुदैँछ । दलहरु आ–आफ्ना प्रतिबद्धता र संङ्कल्प बोकेर जनताकोबीचमा गइरहेका छन् । यही विचमा नेकपा (एमाले) भोजपुरले भने ‘भोजपुरको विकास र समृद्धिको रणनीतिक गुरुयोजना–२०७९’ तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र गुरुयोजनाको बारेमा नेकपा (एमाले) भोजपुरका अध्यक्ष शरणकुमार राईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपा (एमाले) भोजपुरले ‘भोजपुरको विकास र समृद्धिको रणनीतिक गुरुयोजना–२०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । यो कस्तो गुरुयोजना हो ?
– तपाई हामीलाई थाहा छ, ‘राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् व्यवस्था बदल्नको निम्ती नेकपा (एमाले) भोजपुरका नेताहरुले निर्वाह गरेको भूमिका गौरवमय छ ।’ तर विकास र समृद्धिको हिसाबले भोजपुरको अवस्था उतिधेरै उत्साह लाग्ने खालको छैन । आधरभूत आवश्यकताका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि नै भोजपुरले संघर्ष गरीरहनु परेको तितो यर्थाथ हामीसँग छ । ‘भोजपुरले नेता मात्रै जन्मायो तर समृद्धि भएन’ भन्ने खालका आलोचना धेरै सुन्न पाइन्छ । विकास र समृद्धिको ठोस योजना निर्माण नहुँदा राज्यको सबै तहमा भोजपुरहरुको निर्णायक उपस्थीति हुँदाको लाभ समेत उठाउन नसकिएको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । ठोस योजना भए त्यस अनुरुप भोजपुरबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले श्रृखलाबद्ध विकासका लागि पहलकदमी लिन सक्छन् । कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व गर्न सक्छन् । जनताहरुले पनि त्यस अनुरुप अभियान सञ्चालन र दबाब सृजना गर्न सक्छन् ।
अर्कातिर विकासको आवश्यकता र चाहना अत्याधिक छ । तर स्रोत र साधन सीमित छ । सीमित साधन र स्रोतको प्रयोग मार्फत छोटो समयमा अधिकतम् विकास गर्नुपर्ने बाध्यता हामी कहाँ छ । तसर्थ विकासको रणनीतिक योजना भएन भने ती सीमित स्रोत र साधनको पनि सही ठाउँमा र सही समयमा प्रयोग नहुन सक्छ । योजनाबद्ध विकासबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ । रणनीतिक योजना निर्माण योजनाबद्ध विकासको महत्वपूर्ण ‘गाइडलाइन’ हुन्छ भन्ने हाम्रो निचोड हो । भोजपुरबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरुको लागि विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शक दस्ताबेज पनि यो हुनेछ । हामीले यही तथ्यहरुलाई केन्द्रमा राखेर अबको भोजपुर कस्तो बनाउने ? कति समयअवधिमा कस्तो भोजपुर बनाउने ? त्यसको एउटा वैज्ञानिक र श्रृखलाबद्ध योजनाको दस्ताबेज हो यो ।
हामी कहाँबाट, कुन बाटो भएर यहाँसम्म आइपुग्यौं ? अब कता भएर कहाँसम्म जान्छौं ?’ अर्थात् समृद्धिको हाम्रो दिशा कस्तो हुनेछ ? तिनका चरणहरु के हुनेछन् ? कुन–कुन क्षेत्रको बिकास पछि समृद्धि हासिल हुन्छ ? समृद्धिको हाम्रो मानक के हो ? कस्तो हुनेछन् ? यी तमाम प्रश्नहरुको एकमुष्ट उत्तरको रुपमा नेकपा (एमाले) भोजपुरले ‘भोजपुर समृद्धि’को गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
यो गुरुयोजना सार्वजनिक भए लगत्तै केही टिप्पणी र आलोचना पनि सुरु भएको छ । आलोचकहरुको आरोप छ ‘निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि गुरुयोजना बनाइयो ।’ यो आरोप बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–कुनै पनि काम र अभियानप्रतिको टिप्पणी र आलोचना हुन्छ नै । तर तथ्यमा उभिएर आलोचना हो या केवल बिरोधका लागि बिरोध हो त्यो चै हामीले विचार गर्नुपर्छ । भोजपुरको विकास र समृद्धिको गुरुयोजना निर्माण आबश्यक हो या होइन ? गुरुयोजनामा प्रस्तुत योजनाहरु ठिक छन् वा बेठिक ? हामीले बहस गर्ने यसमा हो । कति बेला, कसले ल्यायो ? केवल यसमा मात्रै आलोचना गर्नु, त्यो छुद्र र तुच्छ टिप्पणी बाहेक अरु केही होइन ।
अर्कोतिर निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर ल्याइयो भन्ने जो टिप्पणी गरिएको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । म यहाँ संस्मरण गराउन चहान्छु, म अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि बसेको पहिलो जिल्ला कमिटी बैठक (८–९ फागुन २०७८ )ले यो गुरुयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि करिब एक महिना तथ्य संकलनका लागि हाम्रा सबै स्थानीय तह कमिटीका नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु खट्नुभयो । हामीले यो तयारीको लामो श्रृखला नै चलायौं ।
भोजपुर बजारमा १७–१८ चैत २०७८ भोजपुर समृद्धिको गुरुयोजना कार्यशाला गोष्ठी भव्यताको साथ सम्पन्न भयो । काठमाडौंमा २८ चैत २०७८ भोजपुर समृद्धिको गुरुयोजना कार्यशाला गोष्ठी भयो । त्यसपछि यो हामीले अन्तिम रुप दिएका हौं । सस्तो लोकप्रियताको लागि लहड र रहरले यो तयार गरेका होइनौं । यो हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गरेर तयार पारेका हौं । सस्तो लोकप्रियताको लागि भए त मञ्चमा उभिएर चर्को कुरा गरीदिए पुगीहाल्छ । एकैछिनमा भाइरल भइन्छ । किन यतिलामो र कष्टकर श्रृखला चलाएर तयार पार्नु ?
विकास र समृद्धिको कुरा गरीरहदा नेकपा (एमाले) भोजपुर आफै आधिकारिक निकाय होइन । यो गुरुयोजना कसले, कसरी कार्यान्वयन गर्छ त ?
–असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । हो, नेकपा (एमाले) आफैमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा जनप्रतिनिधि पठाउने प्रमुख पार्टी हो । अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा निर्वाचित हुने त एमोलकै नेता र कार्यकर्ताहरु हो । भोजपुरको सन्दर्भमा आज पनि नेकपा (एमाले) प्रमुख पार्टी हो । फेरि हुनेछ । हाम्रा पार्टीका नेताहरु नै स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुहुनेछ । उहाँहरुले पार्टीको यही योजनाको आधारमा काम गर्नुहुनेछ । यसलाई मार्गदर्शनको मानेर काम गर्नुहुनेछ । एकीकृत र योजनाबद्ध विकास गर्नुहुनेछ । हामीले यसरी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
यसले भोजपुरका स्थानीय तहहरुमा निर्बाचित हुनु हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई बिकास निर्माणको लागि दिग्दर्शन गर्नेछ । भोजपुरको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा सबै नेकपा (एमाले)का र नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समान अवधारणा कायम गरेर योजनाबद्ध र द्रुत विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । केवल नेकपा (एमाले)का जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र होइन सबै समग्र राजनीतिक दल र त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत जिल्लाको विकासका मुद्धाहरुमा एकताबद्ध गर्नेछ । समान दृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।
अब चुनावी कुरा गरौं, यो पालीको निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध गठबन्धन छ । अन्य दलहरुले नेकपा (एमाले)लाई भोजपुरमा ‘क्लिन स्वीप’ गर्छौं भनिरहेका छन् नी ?
– हो र ? त्यसो भनेका छैनन् होला । किनभने नेकपा (एमाले) भोजपुरको लागि गठबन्धन, महागठबन्धन नयाँ होइन । यसअघिका स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भएको नै हो । यसपाली हामीलाई होइन हामी गठबन्धनलाई ‘क्लिन स्वीप’ गर्छौं । किनभने गठबन्धनसँग सत्तास्वार्थ बाहेक अरु केही छैन ।
हामीसँग भोजपुरको विकास समृद्धिको स्पष्ट योजना छ । मार्गचित्र छ । जनताले हामीलाई भरोसा र विश्वास गरेका छन् । गठबन्धनका नेताहरु भाइरल हुनलाई फोस्रा चुनावी मन्तव्य दिएर हिडेका छन् । हामीले भोजपुरको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बनाएका छौं । हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्नलाई हामीले स्पष्ट बाटो कोरेका छौं । तसर्थ अब भोजपुरे जनता भ्रममा पर्ने छैनन् । यसपाली नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार पराजित हुनु भनेको समृद्ध भोजपुरको सपना र संङ्कल्प पराजित हुनु हो । भोजपुरे जनता आफ्नो सपना विरुद्ध आफै उभिने कुराको कल्पना हामी गर्नै सक्दैनौँ ।